ပန်ဒိုရာ: ကမ္ဘာကြီး နှာစေး နေသည်။
ကြမ်းကြား ထရံကြား တိုးတဲ့လေ
ဟတ်ချိုးချေရင်း အအေးမိတာ မဆန်းဘူး
ဖုန်နံ့ ယမ်းနံ့ ကပ်ဘေးနံ့ သွေးညှီနံ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်နံ့
ဘာအနံ့မှ မရတော့တာလည်း မဆန်းဘူး
ဗိုက်တာမင်စီ တွင်တွင်သောက် အချဉ်ပေါက်သွားခဲ့လေသည်။
သူတို့ နှာစေးလို့ တို့လဲ အချဉ်ပေါက်နေတာ ကြာပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမပြု မိမိမှု တဲ့..ညီမရေ။
ယုန်ကလေးနှာစေးနေသည် ပုံပြင်က အဘယ်သူများ
နှာစေးသူတွေ များလှပါလား အရီးပန်ရေ :)
Let the world have the stuffy nose!
We have our own nose to breath the fresh air.
ပျောက်သောသူလည်း ကြာရင်မေ့တာပါပဲ” ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့…….
ကြီးမြတ်သောသူတွေကို လူတွေဟာ အချိန်ကာလတွေ ဘယ်လိုကြာညောင်းလဲ သူတို့ရဲ့ ကြီးမြတ်သောလုပ်ရပ်တွေကို သမိုင်းနဲ့ တွဲပြီး မှတ်မိနေကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓတို့ အောင်ဆန်းတို့ကို လူတွေ ဘယ်တော့မှ မမေ့ကြပါဘူး။
အဲ မကောင်းတဲ့လူတွေကိုတောင်မှ သူတို့ရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ တွဲဖက်ပြီး မှတ်မိနေတတ်ကြတာမျိုး။ ဥပမာ…. ဟစ်တလာ။
စိတ်ထဲက ရွံ့ကြောက်နေသူတွေအဖို့ အသက်မသေသော်လည်း ဘ၀မှာ အကြိမ်ကြိမ်သေခဲ့ရ။ နှာစေးနေတဲ့အတွက် ဂန္ဓာရုံကို မခံစားနိုင်သလို ဘ၀မှ ရှင်သန်မှုရဲ့အဓိပ္ပါယ်ဟာ ကွယ်ပျောက်နေတတ်ပါတယ်။
ဆရာမောင်စွမ်းရည်ရဲ့ အိုဖုန်းမော် ကဗျာလေးထဲက နောက်ဆုံးအပိုဒ်ကလေးကို စကားလက်ဆောင် ထုတ်နှုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဓါးနဲ့ထိုး ဓါးကျိုးလို့ လှံခွေ
သေနတ်တွေ ယမ်းမကူး၊ တပ်ဦးက ဇာနည်ထုံးနဲ့
ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေး ပေးဟေ့ပေး….
ပေးဟေ့ပေး၊ ပေးဟေ့ပေး လို့ တောင်းကြ
မှန်လိုက်လေဗျာ ကျနော်လည်း နှားစီးနေလျှက်နဲ့ဝင်ပွားသွားတယ်း)
ဗီတာမင် ဆီတွေသောက်လဲ အချဉ်ပေါက်မှာပေါ့
သူသောက်သုံးတဲ့ ဆေးဝါးတွေမှာ PEACE ဆိုတဲ့ ဓါတ်တစ်မျိုးချို့တဲ့ နေလို့ပါ။
လာဖတ်ပြီး မှတ်ချက်ရေးသွားသူများ အားလုံးကျေးဇူးပါ။ အခုမှ ပြန်ရေးနိုင်တယ်။ ကိုပေါရေ စိတ်အားတက်ကြွစရာ ကဗျာအတွက် ကျေးဇူးပါ။